Maalmahan, cod ayaa la helo caan iyo aad u badan. Waxaad dhegaysan kartaa cabsaneyso-dhawaajiyeen oo Cajalado hoorto ka podcasts, raadiyaha Internet-ka iyo website-yada warbaahinta bulshada iwm
Sida caadiga ah, kuwaas oo Cajalado hoorto hana u oggolaan in aad si toos ah iyaga soo bixi in aad PC. Laakiin waxa aad sameyn karto haddii aad u baahan tahay music il isticmaalka? Waxaad u bedeli karaan cod si ay u MP3 adigoo isticmaalaya audio weyn geeyo si MP3 Converter - TunesGo .
Mabda'a this smart app wuxuu qaadanayaa waa si ay u qoraan audio geeyo sida uu u ciyaaraa dhex kaarka codka your computer ee. Sidaas audio geeyo si MP3 Converter dhab ahaan kaa caawin karaa inaad dhammayn cod si ay u MP3 oo aan wax khasaare ah oo tayo leh maqal ah. Just leeyihiin isku day ah!
Tallaabo 1: Ku rakib iyo abuurtaan il inay mp3 Converter
Si aad u soo bixi this taariikhqorihii audio geeyo, si fudud ku siin xiriirka hoose hit ah. Intaas ka dib, aad qabto si loo soo dajiyo TunesGo adigoo gujinaya faylka .exe labo jeer. Ugu dambayn, geli interface ugu weyn ee ay bilaabay taariikhqorihii geeyo audio ah.
Tallaabo 2: Ku bilow record free mp3 geeyo
Tag interface ugu weyn, ka dib markii taas oo ay tahay in aad guji badhanka ay ku qoran tahay "taariikhqorihii" laga helo qaybta bidix iyo sare ee shaashadda. On biraawsarkaaga, raadinta markaas ciyaaro audio gaarka ah kuwo liita in aad rabtid in aad u qoraan.
Tani rikoorrada geeyo audio toos ah u bilaabi doonaa si ay u qoraan free mp3 geeyo sida ugu dhakhsaha badan kaarka codka of your computer bilaabo inuu u ciyaaro. Just siiyo isla button reading "taariikhqorihii" ayuu hit kale marka audio geeyo la sameeyo si rasmi ah u dhaliyay qalabka si ay u joojiyaan qoro.
TunesGo ka duwan converters kale ee mp3 hoorto in in la tirtiro baahida loo qabo in tilmaamaya qaab aad la doonayo in wax soo saarka sida MP3, tusaale ahaan. Waxaa isla Qori music geeyo qaab MP3. Si loo helo files MP3 in lagu kaydiyaa your computer ka, si fudud iyaga xaq-riix oo intaas ka dooran "Open ee folder"
Talooyin: Maxaad samayn kartaa la diiwaan hoorto MP3 files audio
1. Play audio geeyo ku Lugood ama MP3-socon ciyaaryahan kasta warbaahinta sida iPod, si aad mar walba oo meel kasta oo ku raaxaysan karaan. Waxaad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo audio geeyo si Lugood la il si mp3 Converter kaliya adigoo gujinaya Add badhanka Lugood in. Ama waxaad ka heli kartaa meesha files ee ku kaydsan yihiin iyo dajiyaan in ciyaartoyda MP3 warbaahinta keligaa.
2. Edit in qaar ka mid ah software tafatirka si ay u abuuraan aad masterpiece weyn. Haddii aad qorshaynayso in la abuuro ringtone ah shakhsi iyada oo la isticmaalo diiwaan music hoorto, oo aad si fudud toos ah u edit karaa in app this.
3. waa inuu ku gubaa galay CD ururinta. Lugood lagu talinayaa sida gubi ah CD lacag la'aan ah.
Sidee Baan U beddelaan AVI lagu MPEG4?
Sida loo Edit M4V Video Files in Windows / Mac
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Streaming Audio in MP3